Toos u Daawo: Dooda Musharixiinta oo Bilaabatay, Waxyaabaha ay ka hadleen!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Toos u Daawo: Dooda Musharixiinta oo Bilaabatay, Waxyaabaha ay ka hadleen!!
Toos u Daawo: Dooda Musharixiinta oo Bilaabatay, Waxyaabaha ay ka hadleen!!
Feb 06, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Dooda Musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada Soomaaliya ayaa hadda Bilaabatay , waxaana maanta Gelinka hore dooda loo qaban doonaa 12 Musharax sida uu sheegay Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Sida uu qorshuhu ahaa in maanta gelinka hore su’aalo la weydiiyo 12 musharax, gelinka danbena su’aalo la weydiiyo 11 musharax, waxaa hada muuqada in kooxdii gelinka hore loogu talagay ay ka joogaan 3 musharax oo keliya.
Musharixiinta maqan waxay isugu jiraan kuwo diiday , kuwo cudur daartay iyo kuwo aan goobta dooda iman iyagoon wax warcelin ah sameyn.
Musharaxiinta ayaa la waydiinaya Su’aalo la Xidhiidha waxqabadkooda, Doodaan ayaa laga daawanaya Muuqaal baahiyaasha Soomaalida, Musharax kasta waxaa uu haystaa Laba daqiiqo oo uu Su’aasha uga jawaabayo.
Previous Postqaybta Labaad Soo jeedinta Dood Furan oo ee kasoo qayb galeen Musharaxiin culculus Daawo!! Next PostCali Khaliif Galeyr oo goor dhow gaaray magaalada Hargeysa, dayuuradna ka raacay!!